Guddida Heer Qaran ee U-diyaar-garowga iyo Ka Hor-tagga Xanuunka CORONA VIRUS Oo Bulshada La Wadaagay Qodobbo Fulintoodu Waajib Tahay | Dhaymoole News
Hargeysa(dhaymoole)-Guddida heer qaran ee uu dhawaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland u magacaabay u diyaar-garawga iyo ka hortagga xanuunka CORONAVIRUS, ayaa maanta soo saaray go’aamo muhiim u ah badqabka iyo fayo-dhawrka bulshada Somaliland oo ay waajib tahay fulintoodu.
War-saxaafadeed ay guddidu goor dhaweyd soo saareen ayaa u dhignaa sidatan:
1. Xarumaha Caafimaadka ee Gaarka loo Leeyayahay
• Waxa reebban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka.
• Dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka waxa lagu wargalinaya in ay si mutadacwacnimo ah iskaga diiwaan galiyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada ee ugu dhaw.
2. Goobaha Waxbarashada dalka
• Dhammaan Imaamyada iyo Mu’addiniinta waxa la farayaa inay furaan daaqadaha Masaajidada.
• Qofkii dareema caalamado muujinaya hargabka waa inaysan iman Masaajidyada ayna ku tukadaan guryahooda.
4. Isu imaatinada Bulshada
• Waxa gabi ahaanba mamnuuc ah Shirarka iyo siminaarada ay qabtaan hay’adaha kala duwan ee dalka muddo 4 todobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta ay taariikhdu tahay 19 March 2020.
5. Socdaallada iyo Duullimaadyada Diyaaraadaha
• Waxa la joojiyey dhammaanba duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida China, Italy Iran, France, South Korea, Spain, Kiiniya iyo Soomaaliya laga bilaabo maalinta ay taariikhdu tahay 19 March 2020. Sacaadda 06:00 galabnimo muddo 4 toddobaad ah.
• Waxa dhammaan muwaadiniinta Somaliland loogu baaqayaa in ay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka gudihiisa.
• Waxa dhamman qurba-joogta reer Somaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaalada aan laga maarmi karo ee ay dalka ku iman lahaayeen inta xaaladda aduunka ee xanuunkani ka soo raynayso.
6. Guddiyada Gobolada ee U-diyaar-garowga iyo ka-hor-tagga xanuunka CORONAVIRUS .
• Si loo xoojiyo u diyaar garowga iyo ka hortagga xannuunka CORONAVIRUS waxa la dhisay guddiyada Gobolada oo ka kooban: